Cabdillaahi Suldaan, halkii ayuu ka sii waday gabayadiisii uu Soomaali tilmaan iyo wax-sheeg teed walba ugu dhigayay. Xilligan suugaaneed ee Timacadde waxa ballaysin u ahaa geeraarka caan-baxay ee halhayska u noqday dadka Soomaliyeed meel ay joogaanba, Cabdillaahi Suldaanna lagu suntado ee ah: “Kaa na siib kan na saar”.
Waxa la yaab leh sida uu u adeegsaday labada erey ee kala ah: kaa iyo kan ee uu weliba ugu kala ladhay ereyada siib iyo saar. Calankii Ingiriiska ee la dejinayay iyo calankii Soomaaliyeed ee berigaa la taagayay ayuu ereyadaa kala siiyay. ‘Kaa’, oo wax kaa fog tilmaamaya oo uu ku ladhay ‘siib’ calankii Ingiriiska ayuu qayb u siiyay; calanka Soomaaliyeed oo markii ugu horreysay dalkiisii oo xor ah laga qotominayayna, isaga oo soo dhawaynayay wuxu isugu daray ‘kan’ oo qalbiga aad ugu dhow iyo ‘saar’ oo kor-u- qaadis ah.
25kii Juun 1960kii ayaa reer Hargeysa iyo dad faro badan oo gobolladii kale ka kala yimid isugu soo baxeen garoonkii kubbadda cagta ee ku oolli jiray xagga koonfureed ee malcaamadda Ina Sheekh Ibraahin Baraawe. Waa halka markii danbe laga dhisay xaruntii xaafadda 26ka Juun, immikana Masaajidka laga dhisay.
Dadku waxay tubnaayeen garoonkaa hareerihiisa. Goolkii sare ee garoonkaa oo xigay xagga guryaha laynka bilayska (halka uu immika ka dhisan yahay Hotel Ubax) meel in yar ka soo horreysay midigna ka xigtay, biyo-mareenna ahayd oo burciidi taallay, waxa fadhiyay madaxdii Soomaaliyeed oo uu hor socday Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo tii Ingiriiska oo uu hormmod ka ahaa ninkii la odhan jiray Karal. Kuraasi ayay ku fadhiyeen, waxaana hor yaallay miisas iyo makrifoon. Iyaga oo u jeeday xagga woqooyi, meel hortooda ah oo bidix ka yar xigtay waxa ku qotomay laba birood oo labada calan loogu kala talo galay.
Marka woqooyi loo jeedo, birtii midigta xigtay waxa lahaa calanka Soomaaliyeed, tii bidixda xigtayna calankii Ingiriiska. Garoonka dhexdiisa waxa tubnaa ciidan Ingiriis ah oo kuwa muusigga garaaca ah oo Cadan laga keenay oo dhinaca galbeedka oo badhtanka u dhow tubnaa.
Roob aan sidaa u sii badnayn ayaa galabtaa tiixay. Labadii calan ayaa la is-weydaariyay. Waa markaa, marka uu Timacadde sidii xiisaha iyo xarragadaba lahayd ugu luuqaynayaa geeraarkan halkudhegga iyo halhayskaba noqday ee dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba ku hadaaqaan.
Ereyada ka sokow, Cabdillaahi Suldaan waxa maansooyinkiisa bili jiray oo badh ka ahaa luuqdiisii gaarka ahayd ee aanay cidina la wadaagi jirin sida loo canjilaana ay adkayd, ilaa maantana ay adag tahay. Luuqdaa qudheedu iyada oo baadi-sooc u noqotay maansada qaaliga ah ee Cabdillaahi Suldaan, waxa xusuus gaar ah mudan in halkan lagu tilmaamo in maalmahaa ay doobta Timacadde taagnayd heerarkii ugu sarreeyay uguna macaanaa ee codkiisu gaadho, kolleyba inta aan anigu garanayo.
Markuu geeraarkan ku luuqaynayo run ahaantii waxaad moodaysaa in ay koox jabsan oo isla taqaannaa muusig qalab door ah leh tumayso oo muddo lagu soo carbinayay. Been sheegi maayo, haddii aan idhaahdo waxba xilliyadaa luuqdiisu ka ma ay dhacayn ama kama ay sokeyn “symphony”. Run ahaantii luuqda Cabdillaahi Suldaan waxa kale oo ay heer kaa la mid ah taagan tahay marka uu marinayo gabayga Miimleyda ah ee Murugo, halkudheggiisuna yahay: Madoobaadayeey xalay miyay, murugtay laabtaydu. Qofkii doonaya in uu ku raaxaysto luuqda Timacadde halkaa ha ka doono.
Galabtaa Cabdillaahi Suldaan, wuxu yidhi:
In dhaweydba waa taan sahladay, sadarradaydiiye,
Ma sifaynin maansooyinkaan, saayidkaw helaye,
‘Seerkuleer’ ayaamahan ma bixin, soon-fur dabadeede,
Subuucii dhammadaba mar baan, saari jiray luuqe,
Sidde la qabsaduu leeyahiyo, subucyo dhaadheere,
Labadaba markuu seego way, kaa surgucantaaye,
An sifeeyo maantana tixday, sihatay laabtaydu,
Sita leeb iyo qaanso oo,
Siigadoon isku aasiyo,
Sabad reer ka fogaaninoon,
La ii aaminin soofkiyo,
Saacan maanta an joogno,
Gabaygu waygu sugnaayoo,
Anigawgu sarreeya e’,
Haddii aan sarsarriigo,
Ama aan sixi waayo,
Ama aan sarmo-seejo,
Ama aan ka sal-guuro,
Ama laygu saluugo,
Soomaalida I maqleysaay,
I su’aala hadhowto,
Ilaahaan waxba seegine,
Sabbaxooyin ku sheegayoow,
Saciira iyo Naciima,
Rabbigii kala seerayoow,
Markay Suurtu dhawaaqdee,
La soo saaro makhluuqa,
Shaqiga iyo saciidka,
Maalintaad kala soocdo,
Rabbigayoow naga saamax,
Subciyayoo ka dukeeyaye,
Sowd kaleetona waa,
Soomaalidoo calan taagta,
Saakay noogu horreysoo,
In sidayda tihiin iyo,
In kalaanan saxaynine,
Saddex ‘wiig’ iyo maalmo,
Haddaan soor cuni waayo,
Safrad layga ma yaaboo,
Sarina meyso naftayda e’,
Saaxirkii kala guurraye,
Aan siduu yahay eego e’,
Kaana siib kanna saar,
Sagal maanta darroorayoo,
Siigadii naga maydhayoow,
Kii soo saaray cadceeddoow,
Samada kii u ekaayee,
Xiddigaa mid la siiyayoow,
Sirta kay ku arkeenoow,
Sibyaanta iyo haweenku,
Cidina kaanay na siinnine,
Saatir noogu yaboohayoow,
Khalqiga kii u sinnaayee,
Mid saaxiib la ahaynee,
‘Singalkii’ iska diidayoow,
Kii saaciidada keenayoow,
Sadadu kay ku xidhnaydoow,
Siraadkii na iftiinshayee,
Soomaaloo dhan xoreeyayoow,
Faradka iyo sunnaa,
Wixii diinta ku saabsan,
Asna kii saddexeeyayoow,
Kii gumeysiga saarayee,
Seedihii bogsanaa iyo,
Seetadii naga gooyayoow,
Isa seeggan dhammaanoo,
Saqda qaylo dhawaaqdiyo,
Sulub laysu cabbaystiyo,
Hadba soof la xabbaadhiyo,
Saraayaa demi weyday,
Kii laydhiisu na saaqdayoow,
Kii sadqeeyay qabaa’ilee,
Isu saaray gacmaayee,
Saf walaala ka yeelayoow,
Waax-waax noo kala saaftayee,
Innagoo dhexda suunku,
Kii sadkeenna cunaayayee,
Sarartiisa ka muuqdayee,
Surwaalkii ka yaraadayee,
Daaro loo sibidheeyiyo,
Sariiraa lagu seexdiyo,
Kabadh suuf laga buuxshiyo,
Mid baabuurta sifeeyiyo,
Sagaal ‘boy’ iyo ‘kuug’ iyo,
Aayad saarta carruurtiyo,
Weliba seeska lahaa,
Kii saabaanka u laabayoow,
Sowjarkaa hubka qaatayee,
Intuu soodhka ku taagay,
U diyaar ah salaantiyo,
Ka siyaadiya maantoo,
Sibilkeenan ag joogoow,
Nin walbaan sigib-beeloo,
Sare u taaga gacmaayoo,
Sacabka isku garaacoo,
Nin walbaan saddex goor,
Subxaanoow waa mahaddaa dheh.
(Waxaan ka qoray cajalad uu Timacadde ku duubay)
 Theirs stands for the British flag,
 Ours stands for the Somali flag,
 Ka timid ereyga Ingiriisiga ah ee “circular”, Timacadde halkan tixdiisii ayuu ka dhigayaa sidii wareegto oo kale,
 Ka yimid wadarta ereyga carabiga ah ee “sabi” oo ah ilmaha, halka “sibyaan” ay ka noqonayso carruurta,
 “Single” waa erey Ingiriisi ah oo la macne ah keli ama suke,
 Ka timid ereyga Hindiga ah ee “aya” oo la macne ah gabadh mididin ah ama shaqaysa. Aayad waxa aad looga isticmaali jiray Jabuuti,
 Ninka fardaha dhaqaaleeya ayaa la odhan jiray sees,
 Ka timid ereyga Ingiriisiga ah ee “civil” oo halkan gabayaagu u la jeedo dadweynaha,
← The Cold War and the Cuban Missile Crisis
Ciyaaraha Hiddaha iyo Dhaqanka Wil-wile: →